Mpamatsy milina fanodinana fako biolojika mora vidy sy mpamatsy | YiZheng
Inona no masinina Hydro Organic Waste Composting Turner Machine?
ny Milina fanodinana fako biôlôjika nefika mandray ny tombotsoan'ny teknolojia famokarana mandroso ao an-trano sy any ivelany. Mampiasa tanteraka ny valin'ny fikarohana bioteknolojia avo lenta izy io. Ny fitaovana dia mampifangaro teknolojia fanaraha-maso mekanika, elektrika ary hydraulic. Mandritra ny fametahana rivotra sy famokarana oksizenina ny akora fanaovana zezika, dia afaka mifehy tsara ihany koa ny mari-pana sy ny hamandoan'ny akora fanaovana zezika mba hahamasaka haingana ny akora fanaovana zezika, izay afaka mameno ny fepetra takiana amin'ny famokarana zezika betsaka amin'ny zezika organika.
Endri-javatra turner amin'ny fanondranana hydraulic
1) Mety amin'ny fihodinana sy fanatsarana ny fako biolojika, toy ny fako maloto, fotaka fanivanana siramamy, mofomamy maloto ary famoahana mololo.
2) Ampiasaina betsaka amin'ny fanangonam-boankazo sy fanesorana ny asan'ny hamandoana amin'ny zezika organika, zezika, fanariam-pako, fambolena sy fambolena holatra.
3) Azo ampiasaina amin'ny fermentation solar, tanke fermentation ary milina finday, sns. Ary ny milina finday dia afaka mahatsapa masinina slot bebe kokoa ampiasaina amin'ny asany.
4) Ny fermenta sy ny fitaovana enti-manohana azy dia mety ho famoahana be tsy tapaka ihany koa.
5) fahombiazana, fandidiana malefaka, matanjaka sy mateza, na dia mihodina aza.
6) kabinetra fanaraha-maso afovoany, afaka mahatratra ny lahasa fanaraha-maso na mandeha ho azy
7) Miaraka amina starter malefaka dia ambany ny enta-mavesatra fanombohana
8) Ampiasaina amin'ny rafitra fananganana hydraulic nify.
9) Ferana ny switch switch, milalao ny anjara asan'ny azo antoka sy ferana.
Fitsipika miasa ho an'ny fanodinana Hydraulika
Ny vatan-kazo lehibe an'ny Turner fanangonam-bokatra Hydraulika manamboatra bà antsy lava miaraka amina boribory havia sy havanana ary savaivony kely ny savaivony, mba hahafahan'ny milina mampivadika ilay fitaovana, manana permeabilité vita amin'ny solika, tahan'ny fanapahana avo ary fanoherana ambany. Ny ampahany amin'ny fandefasana dia mandray fiara hafainganam-pandeha, izay mahatonga ny fahombiazan'ny herinaratra ho avo, ambany ny tabataba, milamina ny fandidiana ary tsy malama ny slip. Ny endrika dia voaisy tombo-kase tanteraka, azo antoka ary azo antoka. Ny fitaovana dia fehezin'ny boaty iray, mahatonga azy io ho mora sy azo antoka ny asany.
Fampisehoana horonan-tsarimihetsika fampiroboroboana Hydraulika
Safidy maodely fampiakarana Hydraulika fampiakarana
Haingam-pandeha (m / min)
Fahafahana (m³ / h)
18,5 + 18,5 + 0.75
Teo aloha: Crawler Type Organic Waste Composting Turner Machine Overview
Manaraka: Tondra-drano mitsivalana marindrano